Mukadzi weLavitan: Bvunza mibvunzo yako nezve ichi chinowedzera!
Fit Chizi Chingwa: Ona maviri mabikirwo kuti uite mu skillet!
Maitiro ekurerutsa underarms: Dzidza kuzviita nemazvo uye kumba!
utano	 7 March 2017
Vakadzi vazhinji vane tsika yakasimba, basa, imba, shamwari, mhuri, vanopedzisira vashandisa simba rakawanda muhupenyu hwavo hwezuva nezuva uye nekudaro vanoda kuenda kune zvinowedzera, mavitamini, nezvimwe zvinhu zvinopa hupenyu hwakanaka uye nesimba. Iyo indasitiri yezvizoro, uye kunyangwe mushonga, izere nesarudzo kune avo vanoda simba rekutsungirira maitiro ezuva nezuva. Iwo ekuwedzera, anonzi macosmetics ekuzora, ndiwo anonyanya kutsvakwa, uye pakati pawo akabudirira kwazvo nhasi, Mukadzi wechiLavitan. Tsvaga zvese nezvake izvozvi!
Chii chinonzi Lavitan Mukadzi?
Nutri cosmetics ndiyo nyowani sarudzo kune vanhu vari kutsvaga zvinowedzera uye zvipoda zvinobatsira hutano hwavo. Kunyanya vakadzi, avo vane maitiro anowedzera akasimba vanopedzisira vava kuda mavitamini uye zvicherwa mumuviri, kana matambudziko ehutano anogona kusaburitsa muhuwandu hwakakosha. Mukadzi weLavitan ndomumwe weavo mashura ekuwedzera kune vakadzi.
Mukadzi weLavitan vhitamini anowedzera akagadzirwa neCimed laboratory. Maumbirwo aro ane mavitamini C, B3, B5, A, B2, B1, B6, B12 uye vhitamini D, mukuwedzera simbi, zinc uye folic acid. Izvi zvimwe zvezvinhu zvakakosha kuhupenyu hwevanhu uye izvo zvinogona dzimwe nguva kugadzirwa mukushomeka. Nemadzimai evakadzi zvinokwanisika kugovera kushomeka kwehutano uye mamineral anodiwa nemuviri wemukadzi.
Ndekupi kwekutenga Lavitan? Zvingani?
Takaita tsvakiridzo yakawandisa painternet ndokuwana Lavitan pamutengo wakanakisa pane Drogaria Araújo uye Drogaria Onofre. Sezvo uri mushonga usingade mushonga unotengwa, unogona kuutenga zvakachengeteka online. Kuwedzera kune makuru madhiri, ese ma pharmacies ane zvakare kuburitsa muBrazil yose. Ingotenga uye uchagamuchira odha yako kumba. Dzvanya pazasi kuti uwane webhusaiti yeumwe neumwe wavo.
Kuti uwane mutengo, iwe unofanirwa zvakare kushanyira webhusaiti, sezvo iko kutumirwa kunosiyana zvichienderana nedunhu raunogara.
Zvakanakira uye zvakanakira mukadzi wechiLavitan
Lavitan Mulher, sechiwedzero chevhitamini nemaminerari, anovimbisa mamwe mabhenefiti senge akavandudzwa immune immune, kusanyanya kushushikana, simba rakawanda rezviitiko zvezuva nezuva, yakagadziriswa ndangariro uye inodzivirira zvirwere zvine chekuita nemoyo.
Kunyangwe avo vane mashandiro akanaka uye kugadzirwa kwakanaka kwevhitamini nemaminerari ayo aripo muLavitan Mukadzi anogona kuishandisa, chero bedzi iwe uchizivisa chiremba wako kuti urikushandisa chinowedzera uye kuti hachipfuure chiyero chinokurudzirwa pazuva. Vakadzi vanotora Lavitan vane mamwe maitiro emabasa avo, kuramba furuwenza nefuru, pakati pevamwe. Usatarisira mhedzisiro inoonekwa nekushandisa kwaLavitan Mulher, ine basa rekuita "mukati" mukadzi, ndokuti, mhedzisiro yacho iriko mukuvandudza muhutano hwevakadzi.
Mashandisiro ekushandisa iyo Lavitan Mukadzi
Lavitan Mulher inotengeswa mumaPharmacies akati wandei uye muzvitoro zvemishonga mumabhokisi ema60 capsules. Inokurudzirwa muyero yako kushandiswa kwe1 kapisi pazuva pazuva kwehuwandu hwevitamin mineral yekuwedzera, asi zvinogara zvichikurudzirwa kubvunza chiremba kuti iye agone kutungamira nzira yakanakisa yekushandisa. Vakadzi vane pamuviri nevana kusvika pamakore matatu ekuberekwa vanofanirwa kushandisa Lavitan Mulher chete kana zvichikurudzirwa nachiremba.
Iyi yekuwedzera haina gluten.
Max Amora - Anobvisa Zviratidzo zveMenopause
Kana iwe uri mukadzi anodarika makore makumi mana ekuberekwa uye zviratidzo zvekutanga zvekuguma kuenda kumwedzi zvakatotanga kuoneka, tinokurudzira kuti uedze Max Amora! Icho chiwanikwa chechisikigo chinogona kukubatsira kurwisa zviratidzo zvekumira kuenda kumwedzi uye nekukupa iwe hwakanakisa hupenyu.
Seizvo zita rayo rinoratidzira, Max Amora chiwedzero chakagadzirwa kubva pachibereko ichi chakaratidzirwa kubatsira muhutano uye kugara zvakanaka kwevakadzi vari kupfuura neichi chikamu chekuchinja uye shanduko.
KUZIVA ZVIMWE ZVAKAWANDA NEZVE MAX AMORA, CHETE CHETE PANO
Isu tinonyora iwo mabhenefiti makuru aMax Amora pazasi:
Kurwisana NeMenopause Zviratidzo
gara wakasununguka kunopisa
Kurwisana nekutsamwa kunokonzerwa nekuchinja kwehomoni
Anodzosera kuda bonde
Ndinotenga sei Max Amora?
Max Amora chigadzirwa chinotengeswa chete pawebhusaiti yayo, http://maxamora.com.br/. Izvi zvinoreva kuti hauzviwane mumafamasi kana muzvitoro zvekudya zvehutano semuenzaniso. Kubatsira kukuru kweichi ndechekuti iwe unogona kuita kutenga kwako izvozvi, uye iwe uchagamuchira odha yako kukero yaunoratidza. Inoshanda kwazvo, handizvo here?
Kubhadhara kunogona kuitwa nekadhi rechikwereti kana kubhanga slip, uye pakadhi unogona kutsemuka. Dzvanya apa kuti utenge!
Uye zvakare, isu hatigone kutadza kutaura kuti Max Amora parizvino anotumira mahara muBrazil mese. Asi isu hatizive kuti mugadziri acharamba achisimudzira kwenguva yakareba sei! Saka, kana iwe uchinyatsoda kunzwa shanduko iyi muhutano hwako, tora mukana wekutenga kwako!
Dzvanya pane bhatani pazasi kuti utenge:
Makeup yeMukadzi weLavitan
Gum arabic (emulsifier), uye shellac (icing)
Wakisi uye carnauba wakisi
Titanium yakasviba dhayi,
Onawo vhidhiyo nezve iyo Lavitan Mukadzi:
Kana iwe wakashandisa Lavitan Mulher, tiudze isu mune zvakataurwa nezve chiitiko chako nechigadzirwa. Uye kana uchiri nemimwe mibvunzo, siya mubvunzo wako mune zvakataurwa!
409 pfungwa pa "Mukadzi weLavitan: Tsvaga mabhenefiti eiyi yekuwedzera!"
Nyamavhuvhu 4, 2018 pa11: 29 pm - pepeta
Ndine gastritis uye ndingade kuziva kana ndichigona kutora mukadzi wechiLavitan?
Nyamavhuvhu 6, 2018 pa08: 39 pm - pepeta
Ndakatanga kutora L kukuzivisa iwe mazuva mana apfuura, ndakaona kuti zvinoshandura BP yangu kunyangwe mumaziso angu. Uye haina kujairika. Musoro unogara uchirwadza.
Iwe unoti kudii? ??
Nyamavhuvhu 13, 2018 pa21: 36 pm - pepeta
Kupika kunowedzera kumanikidza kwemaziso, ini ndatochinja, iwe wakazviona sei?
Nyamavhuvhu 16, 2018 pa09: 41 pm - pepeta
Ini ndinogona kutora collagen uye kutora lavitan?
Nyamavhuvhu 26, 2018 pa09: 33 pm - pepeta
Lavitan nezvakanakisa zvese, ndakatanga kuitora uye ndikaona mhedzisiro pazuva rechitatu, ndaigara ndakarara ndisina kana chandainzwa, ndinotora bhuruu kubva paA kusvika paZ. Ndinoda kutora girini nepepuru (yebvudzi)
Super inokurudzira unodiwa.
Gumiguru 6, 2018 pa12: 52 am - pepeta
Vanogona here vakadzi kutora lavitan yevarume?
Mbudzi 5, 2018 pa 14:41 - pepeta
ndiani aive netrombosis anogona kutora lavitan mukadzi?
Zvita 4, 2018 pa06: 32 am - pepeta
Mushure mekunge ndatanga kutora vhitamini kubva kumukadzi aive nekuenda kwangu kumwedzi, ndatozviita kaviri, chichava vhitamini here?
Ndira 1, 2019 pa22: 05 pm - pepeta
Ravitan inokora here? Ndakanzwa kakudumbirwa.
Boldo tii: Tsvaga izvozvi zvese mabhenefiti uye kana zvichikubatsira iwe kuonda
Kokonati Shuga: Ona Zvakanakira (uye Zvinonaka Mapoka!)
Yakakosha Plastiki Kuvhiya: Silicone Kuisa Mumabutiro